» ‘रेडजोन’मा प्रदेश १ का ४ जिल्ला र २० स्थानीय तह
‘रेडजोन’मा प्रदेश १ का ४ जिल्ला र २० स्थानीय तह
१४ श्रावण २०७७, बुधबार १२:१८
मकवानपुर ।प्रदेश १ का तराईका जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ । कोरोना संक्रमितको संख्या ठूला सहरहरूमा दिनानुदिन थपिने क्रम पनि उत्तिकै छ । पहिले भारत र तेस्रो देशबाट आएकाहरूमा मात्र कोरोनाको संक्रमण देखिए पनि स्रोत पहिचान नभएका संक्रमितको संख्यासमेत थपिन थालेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइसमेत बढ्न थालेको छ ।
यही मेसोमा प्रदेश सरकारले कारोना संक्रमण र फैलावटको ‘ट्रेन्ड’लाई आधार बनाइ प्रदेश १ मा जोखिमका दृष्टिले सबैभन्दा खतरामा रहेका जिल्ला र स्थानीय तहको सूची तयार गरी टुंगो लगाएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा जोडिएका झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाम कोरोना संक्रमणका दृष्टिले सबैभन्दा धेरै जोखिममा छन् । अर्थात् यी जिल्लालाई सरकारले उच्च जोखिम क्षेत्र मानिएको छ । जिल्ला मात्र नभएर त्यसभित्रका २० स्थानीय तह संक्रमणको जोखिममा छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उच्च जोखिम, जोखिम र कम जोखिम क्षेत्रलाई रेड, एल्लो र ग्रिनजोनका रूपमा वर्गीकरण गरी सरकारले स्वास्थ्य तथा अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रदेश संसदलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमा रहेको देखिएको छ । यहाँ मंगलबारसम्म संक्रमितको संख्या ८२ पुगेको छ । पछिल्लोपटक पुष्टि भएका धेरै संक्रमितको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ छैन । उनीहरूको संक्रमण स्रोत पनि पहिचान हुन सकेको छैन । दुई चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएपछि विराटनगरमा समुदायमा कोरोना गएको निष्कर्ष महानगरको जनस्वास्थ्य महाशाखाको छ ।
मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेली नगरपालिका, सुनवर्षी र रतुवामाई नगरपालिका, जहदा र धनपालथान गाउँपालिका पनि जोखमयुक्त क्षेत्रमा परेका छन् । सुनसरीको कोसी, भोक्राहा, नर्सिङ, हरिनगर, कप्तानगन्ज र बर्जु गाउँपालिका, झापाको मेचीनगर नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, कचनकवल गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका र गौरीगन्ज गाउँपालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । यसैगरी इलामको सूर्योदय नगरपालिका, माई–जोगमाई, सन्दकपुर र रोङ गाउँपालिकालाई पनि सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्र मानेको छ ।
प्रदेश २ को सप्तरी तथा सिरहासँग सीमा जोडिएको र प्रदेश १ मा कोरोना सुरु भएको उदयपुर कोरोनाको जोखममा छ । वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। सुरेश मेहता भन्छन्, “भारतमा फैलँदो कोरोना र हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिअनुसार साँध–सिमाना जोडिएका क्षेत्र अधिक जोखिममा देखिन्छ ।” उनले अहिले नै अधिक रूपमा कोरोना संक्रमित भेटिएका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा खतरा बढ्दो अवस्थामा रहेको बताए ।
अब समुदायस्तरमा कोरोना परीक्षण
सरकारको तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ मा भारतका विभिन्न नाका भएर आएकाहरूमा अधिक संक्रमण देखिएको छ । यो दर कुल संक्रमित संख्याको ६८ प्रतिशत छ । भारतबाहेक खाडीसहितका अन्य मुलुकबाट आउनेको कुल दर १८ प्रतिशत छ । यतै संक्रमण देखिएकाहरू जम्मा १४ प्रतिशत छन् । प्रदेश १ मा हालसम्म लक्षण नै नभएका संक्रमितकै संख्या धेरै देखिएको छ । कुल ९६६ संक्रमितमध्ये १३ प्रतिशतमा मात्र लक्षण थियो ।
सरकारले अब परीक्षणको दायरा बढाउने र समुदाय परीक्षणलाई जोड दिने तयारी थालेको छ । विराटनगर, धरानपछि अब मेची अस्पतालबाट समेत पीसीआर परीक्षण गर्ने सरकाले तयारी गरेको हो । दैनिक १३ सय परीक्षणको लक्ष्य राखिएको छ । हाल करिब दैनिक आठ सयको परीक्षण हुँदै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मेहताले भने, “यस्तो परीक्षण हामीले विराटनगर र इनरुवाबाट सुरु गरिसकेका छौं । क्रमशः अन्यतिर पनि गरिने छ ।” प्रदेश १ सरकारले जनसंख्याको एक प्रतिशतमा पीसीआर परीक्षण गर्ने यसअघि नै जनाउ दिएको थियो ।
सचेत रहन सर्वसाधरणलाई आग्रह
यसैबीच, कोरोनाको प्रदेशको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर वृद्धि भएको बताउँदै भने, “संक्रमण बढेसँगै सचेतना आवश्यक भएको छ । लकडाउनले मात्र संक्रमण नियन्त्रण हुने नदेखिएकाले अब व्यक्ति आफैं सतर्क हुनुपर्छ ।” जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सेवा बन्द गर्दैमा संक्रमण नियन्त्रणमा नआउने बताए ।
निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संगठन (अफिन) का प्रदेश १ संयोजक डा. सुनीलचन्द्र अधिकारीले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन व्यक्तिगत अनुशासन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै भने, “होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नेहरूलाई त्यस्तो सुविधा सरकारले दिनुपर्छ ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी सन्तोष खड्काले अनुशासनमा बस्न नसके संक्रमण नियन्त्रणमा समस्या हुने बताए । कोसी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रका संयोजक डा. डेनप्रसाद आचार्यले संक्रमण बढेसँगै सरकारले संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने बताए ।
विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले विराटनगरमा कोरोना संक्रमण फैलँदो क्रममा रहेकाले खतराको घण्टी बजेको बताए । बाह्रखरी डटकमबाट